Ciyaariyahan loo heesto in xubin muhiim ah uu ka yahay ururka ... | Universal Somali TV
Ciyaariyahan loo heesto in xubin muhiim ah uu ka yahay ururka Al-Shabaab oo ka soo muuqday Maxkamad ku taal Kenya
Xirfadle ciyaara kubada cagta oo caan ka ahaa ismaamulka goboleedka Mombasa ee gobolka xeebta Kenya ayaa isku badalay xubin ka mid ah ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka iyo qeybo ka mid ah Kenya.
Mr Fawaz Ahmed Hamdun oo dhowaan ay ciidanka la dagaalanka Argagixisada gacanta u galay ayaa ahaa ciyaariyahan mustaqbal ku leh kubada cagta waxaana uu caan noqday intii u dhaxeysay sanadkii 2008-da ilaa sanadkii 2012-dii.
Fawas oo waxbarashada ka tagay isaga oo ku jira dugsiga hoose ee Kikoani ayaa guulo badan la gaaray kooxda kubada cagta ee Korea FC ka hor inta uusan noqon matale ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Inkasta oo wiilkaan jaceylka uu u qabay ciyaarista kubada uu iskuulka uga tagay hadane waxaa garoomada kubada cagta laga waayay sanadkii 2012-dii markaasi oo uu ka tagay xaafada Old Town deetana u soo guuray xaafada Majengo ee magaalada Mombasa.
Booliska Kenya ayaa baaritaano hordhac ah oo ay soo bandhigeen waxay muujinayaan in wiilkaan lagu marin habaabiyay masaajidka lagu magacaabo Muusaa oo horay wadaado joogay ay dowlada u toogatay kadib markii lagu eedeyay in ay taageeraan ururka Al-Shabaab.
Si kastaba ha ahaatee Fawaz Ahmed Hamdun ayaa Al-Shabaab u qaabilsanaa fududeynta tasiilaadka dhalinyarada dooneysa in la tababaro ama ay u soo safraan xarumaha kooxda ay ku leedahay gudaha Dalka gaar ahaan Jubbooyinka.
La tuhmahaan ayaa la qabtay kadib howlgal todobaadkii hore ay booliska Kenya ku dileen afar dagaalyahan oo qorsheynayay in weeraro ay ku qaadaan dekada magaalada Mombasa madaarka caalamiga ah ee Moi iyo goobo kale oo muhiim ah oo ku yaal magaalada Mombasa.
Shaqsiyaadka la dilay ayaa waxaa ka mid ahaa Salama Salim, Bakari Mnyapara, Mkubwa Sadi Ramadhan iyo nin kale oo magaciisa ay booliska ku soo koobeen Trio.
Raggaan ayaa waxay wateen qoryaha daran dooriga u dhaca Bambooyin iyo agabyada kale ee laga sameeyo Qaraxyada oo laga helay guriga ay ku Sugnaayeen.
Kan-xigaRoob dad iyo duunyo ay ku diirsadeen ...
Kan-horeWasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashii...
59,409,891 unique visits